ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ခွေးလေခွေးလွင့်များအား ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ် - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ခွေးလေခွေးလွင့်များအား ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်
မနီလာ ၊ ဇွန် ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဇွန် ၂၃ ရက်က တက္ကသိုလ် Sagip (Rescue) K9 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက၎င်း၏ခွေးအား လေ့ကျင့်ပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဇွန် ၂၃ ရက်က တက္ကသိုလ် Sagip (Rescue) K9 အဖွဲ့ဝင်များက ၎င်းတို့၏ခွေးအား လေ့ကျင့်ပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကယ်ဆယ်ထားသည့် ခွေးလေခွေလွင့်များအား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်(UP)ကျောင်းဝင်း၌ လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနေသည်။ ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ် Sagip (Rescue) K9 အဖွဲ့က COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် အစာရေစာ ကျွေးမွေးမည့်သူမရှိသော ခွေးလေခွေးလွင့်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရင်း ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်ကာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#Philippines #dog #rescue #train #ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ #ခွေး #ကယ်ဆယ်ရေး #လေ့ကျင့်မှု #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
MANILA, June 24 (Xinhua) — Saved stray dogs are receiving training at the University of the Philippines (UP) campus in Manila. The UP Sagip (Rescue) K9 aims to find purpose and care for the dogs that were left unfed amid COVID-19 via search and rescue training.
1.A member of the University of the Philippines (UP) Sagip (Rescue) K9 trains his dog at the UP campus in Manila, the Philippines on June 23, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
2.A member of the University of the Philippines (UP) Sagip (Rescue) K9 trains her dog at the UP campus in Manila, the Philippines on June 23, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
3.A member of the University of the Philippines (UP) Sagip (Rescue) K9 trains his dog at the UP campus in Manila, the Philippines on June 23, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
4.Nano,aformer stray dog, is trained to “sit and wait” by handler during the University of the Philippines (UP) Sagip (Rescue) K9 training at the UP campus in Manila, the Philippines on June 23, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
5.A member of the University of the Philippines (UP) Sagip (Rescue) K9 is seen with her dogs at the UP campus in Manila, the Philippines on June 23, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
6.Members of the University of the Philippines (UP) Sagip (Rescue) K9 train their dogs at the UP campus in Manila, the Philippines on June 23, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali) ■
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ စစ်တပ်ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှုအတွင်း ၆ ဦး သေဆုံး
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ငြင်းဆန်သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Houston Methodist ဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၁၅၃ ဦး အလုပ်မှ နုတ်ထွက် သို့မဟုတ် အထုတ်ခံရ